आज साउन १५ अर्थात् ‘राष्ट्रिय खिर दिवस’, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि आवश्यक फस्फोरस, क्लोरिन, क्याल्सियम, पोटासियम, सेडियम, म्याग्नेसियमलगायत खनिज पदार्थले युक्त दूधबाट बनाइएको खिर खाएर यो दिवस मनाइँदै छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले पनि ‘पोषिलो खिर उपभोग...
-डा. एकनारायण पौड्याल
हामी सबैले भनिरहेका छौं कि राजनीति गलत दिशातिर गयो । तर जब सही दिशातिर फर्काउने अवसर आउँछ तब फेरि हामी नै उही पुरानो बाटो हिँड्छौं । सुधार खालि बोलेर र कल्पना गरेर मात्र आउँदैन । त्यसका लागि व्यावहारिक रूपमा...
– सन्तोष श्रेष्ठ, आसन्न १४ औं महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसका समर्थक, शुभचिन्तक, कार्यकर्ता तथा नेताहरुबीच केन्द्रदेखि प्रदेश, पालिकादेखि टोल टोलमा चासो अनि चर्चा छ । कांग्रेसलाई हिजो भन्दा अझ राम्रो अनि ससक्त बनाउन प्रत्येक महाधिवेशनले उर्जा दिने छ । महाधिवेशन नेतृत्व...
चितवन – उ बेलाको भरतपुर कस्तो थियो ? त्यो बेला स्थानीय तहले कसरी काम गर्थे ? बेलाबखत यी प्रश्नहरु उब्जिन्छन् । साविकका भरतपुर र नारायणगढ गाउँ पञ्चायत मिलाएर २०३५ सालमा भरतपुर नगर पञ्चायत बन्यो । बहदुल आएपछि २०४८ मा...
सभापति, बरिष्ठ नेता एवं सम्पूर्ण केन्द्रीय पदाधिकारी ज्युहरु, नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपा, ललितपुर आदरणीय नेता ज्यु ,म एक काँग्रेसको सुभेच्छुक साथै एक साधारण कार्यकर्ता र माओवादी को हिंस्रक युद्धमा मारिनु भएका गोर्खा काँग्रेसका नेता स्व भैरबराज बिष्टको छोरा पनि हुँ ।...
- राजु सापकोटा
हो म त्यो देशको नागरिक हो । जहाँ कोरोना संक्रमित बिरामी अक्सिजनको अभावमा परमधाम जान बिवश छन । हो म त्यस्तो देशको नागरिक हो । जहाँ संक्रमित जनताहरु जानी नजानी मृत्यु वरण गर्न बाध्य छन । कतिपय संक्रमितले त...
राजु सापकोटा को कौरब ? को पाण्डब ? छिट्टै टुङ्गो लाग्ला ? छ शक्ति यो स्विकार गर्ने ? कि को दुर्योधन ? को युधिष्टिर ? छ सत्य स्विकार गर्ने क्षमता ? छ भने ठिकै छ । होइन भने प्रतिक्षा गरौं...
राजु सापकोटा, राजनीतिक तरंग ल्याउने मामिलामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मुकाबिला गर्न सक्नें सायदै होलान । माओबादी–एमाले एकतादेखि फागुन २८ को घट्नाक्रमलाई फर्केर हेर्दा प्रष्ट चित्र देखिन्छ । दुबै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई समेत सरप्राईज दिनेगरि भएको पार्टी एकता होस । वा...
संसदको अंकगणित : ढल्दैन ओली सरकार !
राजु सापकोटा, नेकपा एमाले अहिले आफ्नै सरकार टिकाउन भरमग्दुर प्रयासमा छ । पार्टीभित्रको माधाव नेपाल समूहले पनि प्रधानमन्त्रीमा अध्यक्ष केपी ओलीलाई टिकाउन भइरहेका प्रयासको बिरोध गरेको छैन । सत्ता टिकाउन भइरहेका हरेक छलफलमा अध्यक्ष ओली निकटस्थहरु मात्रै देखिएका छन । पार्टीद्वारा...
राजु सापकोटा, १. रेशम चौधरीको रिहाइ २. संविधान संसोधन ३. नागरिकता बिधेयक यि प्रमुख ३ सहितका विविध माग यसपाली नगदमै संवोधन हुँदैछ । त्यो पनि सत्ता टिकाउनको लागि । सत्ता कसको टिक्ने हो ? वा कसको बन्ने हो ? त्यो समयले पक्कै देखाउला...